अस्पतालको बेडले अब संक्रमितलाई धान्न नसक्ने हुनसक्छ – Health Post Nepal
२०७७ साउन २१ गते १७:११
केही दिनयता कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या उकालो लागिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने मानिसको संख्या कम भएसँगै क्वारेन्टाइन संख्या घट्दै गयो। अहिले देशभर लकडाउन खुकुलो भएसँगै संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।
समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिइसकेको आँकलनबीच भोलिका दिनमा भयावह रूप लिने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् ।महामारी नियन्त्रणका लागि अब सरकारले के गर्नुपर्छ? संक्रमणको सामना गर्न हामी कति समक्षम छौं? जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीसँग हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीको अंशः
कसैलाई संक्रमणको शंका छ भने परीक्षण गरेर पत्ता लगाउने गुन्जायस एकदमै कम थियो। किनभने हाम्रो टे«स्टिङ गाइडलाइनले परीक्षण साघुँरो बनाएको थियो। पछि विदेशबाट आउने र
क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसको संख्या घटेपछि स्वतः परीक्षण कम हुनेबित्तिकै संक्रमण संख्या कम देखिएको हो। त्यही कारणले पहिला लक्षण नभएका मानिसहरू देखिरहेका थियौं। अस्पताल तथा क्लिनिङबाट परीक्षण गराइएका मानिसमा लक्षणको केस धेरै बढ्न थालेको छ।
लकडाउन खुलेपछि आवतजावत बढेको, भौतिक दूरी कायम गर्न नसकेको, मास्क नलगाएका कारणले पनि संक्रमण फैलिएको छ। लकडाउन मात्रै समाधान होइन। यदि समुदायमा संक्रमण धेरै देखिन थाल्यो र विशेषगरी अस्पताल बेड नपुग्ने, आइसियु, भेन्टिलेटर नपुग्ने अवस्था आउन थाल्यो भने लकडाउन गर्नुको अन्य कुनै विकल्प हुँदैन।
लकडाउन खुल्दै गएपछि मानिसको आवातजावतसँगै संक्रमणको संख्या बढेपछि समुदायमा फैलिँदै छ। जुन कारणले अहिले २–४ दिनयता केसहरू देखिन थालेको छ। यसलाई रोक्न परीक्षणको दायरा बढाउने र संक्रमित पहिचान पहिलो स्टेपमात्रै भयो । यसले मात्र पर्याप्त हुँदैन।
अहिले नै जनस्वास्थ्यको हिसाबले लकडाउन खोल्न उपयुक्त थिएन। नेपालमा संक्रमणको संख्या घट्दै छ। त्यसकारणले खोलेको हो भने एकदमै गलत हो। तर, लकडाउन खोल्नु र अहिले नगर्नुमा आर्थिक, सामाजिक पाटो पनि रहेका होलान्। लकडाउन खोल्ने अहिले गलत र सही छ भन्नेतर्फ नजाउँ।
एकजना मानिस अफिस गएको होला। दिनभरमा कति जना भेटेको होला, बाहिर बसेर चिया खाएको होला वा अन्य विभिन्न काम गरेको होला? कन्ट्रयाक ट्रेसिङ कहाँ–कहाँ गएको थियो। को–को मानिसलाई भेट गरेको थियो? मास्क लगाएको थियो कि थिएन। यस्ता विभिन्न कुराको अन्तर्वार्ता लिए जसरी कुरा लिनुपर्छ।
त्यसअनुसारको शंकाको घेरा पर्दछन्, त्यस्तालाई परीक्षण गर्न पठाउने वा आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइन गर्न जस्ता कुरा गर्नुपर्छ। अबको संक्रमण रोक्नका लागि कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा नै फोकस हुनुपर्छ।
सबैलाई अस्पताल भर्ना गरेर सम्भव हुँदैन।
संक्रमण हुनेबित्तिकै अस्पताल भर्ना गर्न थाल्ने हो भने बेड भरिन्छ। समुदायमा संक्रमण देखिन थालेपछि अब अस्पतालको बेडले धान्न सक्दैन।